I-Studio 40sqm ene-balcony ebheke eningizimu, igceke elingasese
Parcines, Trentino-Alto Adige, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Josef & Franziska
Ipulazi lethu liphakathi kwezimfunda ezizungezile eziluhlaza, limile ngokukhululekile futhi libukeka kahle nxazonke.Ifulethi libheke eningizimu, ukusuka kuvulandi walo unombono omuhle wedolobha le-spa laseMerano kanye nendawo ezungezile.
Imizuzu emi-5 ngemoto usuka edolobhaneni lasePartschins, 7km ukusuka eMerano kanye nemizuzu engama-20 ukusuka enhlokodolobha iBolzano.
Uma ufuna ukuthula nokuthula, ufuna ukuphumula futhi uzizwe ukahle, uwedwa noma njengombhangqwana ku-"Nestl" yakho, ungabhukha leli fulethi elihle.
Ayikho indawo engozini !!!
Ifulethi elivaliwe ngokuhlukile, elicatshangelwayo eliku-40sqm eline-balcony ebheke eningizimu.
Ifulethi liphansi kwe-mezzanine endlini yethu, lifinyeleleka kalula ngezitebhisi ezimfushane.
Kunesikhala sabantu abangu-2 egumbini lokulala esinomatilasi bezinga eliphezulu kumbhede ophindwe kabili onethezekile. Kungenzeka futhi kumuntu owengeziwe esihlalweni esidonsayo onomatilasi wangempela noma ingane engu-1 (nombhede) endaweni yokuhlala.Igumbi lokugezela likhulu, livaleleke ngokuhlukana futhi lineshawa elingenazithiyo. Ukushisa kwaphansi ukuze kufudumale okumnandi kuwo wonke amakamelo.
Ikhishi linakho konke okulungile ongase ukudinge ngesikhathi esithile eholidini, akukho lutho olulahlekile.
umbhede oyidabulu engu- 1, 1 usofa, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
Ukuma ngaphandle kwendawo eseduze. Kuthuleke kakhulu kungaphazanyiswa abanye abahleli endlini.
Ibungazwe ngu-Josef & Franziska
Siyajabula ukusekela izihambeli zethu ngamathiphu okuqwala izintaba nawokuvakasha ... kodwa zinikeze inkululeko ephelele yokuhlela izinsuku zazo zeholide.
UJosef & Franziska Ungumbungazi ovelele
Izilimi: Deutsch, Italiano